Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaliya oo kulan la yeeshay Taliyaha Nabad Sugida Soomaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaliya oo kulan la yeeshay Taliyaha Nabad Sugida...
Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaliya oo kulan la yeeshay Taliyaha Nabad Sugida Soomaliya
Sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay oo caawa soo baxay Ergayga Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya danjire James Swan ayaa kulan gaar ah la qaatay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ah Agaasimaha heyadda Nabad sugida & Sirdoonka Qaranka NISA.
Kulankan ayaa looga hadlay xaalada guud ee dalka gaar ahaan dhinacyada Siyaasadda, amniga, dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada, iyadoo si gaar ah diirada loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka, xili muddo kooban ay ka hartay mudadii afarta sano aheyd ee xilka loo doortay madaxda talada heysa.
Inkastoo uusan jirin War-saxaafada loogu talo galay oo ka soo baxay kulankan xasaasiga ahaa haddana warar ku dhow dhow ayaa sheegaya in James Swan uu u gudbiyey Fahad Yaasiin fariin ku socota Madaxweynaha oo la xiriirta sidii deg deg ah loogu wajihi lahaa qabashada doorashooyinka dalka.
Dad badan ayaa isweydiinaya sababta Wakiilka Q/Midoobey u qaabilsan Soomaaliya uu kulamo looga hadlayo xaalada siyaasadeed ee dalka ula qaadanayo Taliyaha Sirdoonka, iyadoo ay joogaan madaxdii dalka ee ka sareysay sida Madaxweynaha & RW.
Maraykanka oo ka mid ah dowladaha sida weyn u taageera DF ayaa 24-kii saacadood ee ugu dambeeyey xoojiyey cadaadiska uu ku hayo madaxda dowlada, isagoo ugu baaqaya iney wadahadal la yeeshaan madaxda dowlad goboleedyada iyo asxaabta siyaasadeed ee ka jirta, si leysula meel dhigo qorshe mideysan oo la xiriira doorashada soo socota ee dalka.
Next articleTaliye ka tirsan Galmudug oo Xabsiga la dhigay isagoo Dharka Ciidanka wato
Mooshin ay saxiixeen Xildhibaano Badan oo loo gacan Galiyey gudoonka...
Ma hir gali Doontaa Damaca Madaxweyne Farmaaho iyo Kheyre 4...